Mamely mafy an’i “Khuzestan main’ny hetaheta” ny fanjakana iraniana · Global Voices teny Malagasy
Nilaza ny Amnesty International fa valo farafahakeliny no matin'ny famoretana
Voadika ny 16 Aogositra 2021 4:12 GMT
Vakio amin'ny teny فارسی, عربي, Español, русский, English
Sariitatra nataon'ilay mpanao sariitatra Iraniana monina any Alemaina, Assad Binakhahi. Nahazoana alàlana.
Nipoaka nanerana ny tanàna maromaro tao amin'ny faritanin'i Khuzestan manankarena indrindra ao Iran ny fihetsiketsehana nanomboka ny 15 Jolay, satria nanosika ny vahoaka hiampanga ny manampahefana tsy mahay mitantana ny rano, na ny rano fisotro na ny rano fanondrahana ny fambolena ny haintany naharitra volana maro tany amin'ny faritra atsimo andrefana.
Andro vitsivitsy taorian'ny fihetsiketsehana, nilaza ny Amnesty International tamin'ny tatitra tamin'ny 23 Jolay fa nanamafy ny fahafatesan'ireo mpanao fihetsiketsehana sy olona nijorojoro valo fara fahakeliny, anisan'izany ny zazalahy kely iray, taorian'ny fampiasan'ny manam-pahefana bala tena izy mba hamonoana ny fihetsiketsehana. Nilaza anefa ny haino aman-jery sy ny tompon'andraikitra Iraniana fa olona telo farafahakeliny no maty, ao anatin'izany ny polisy iray sy ny mpanao fihetsiketsehana iray.
Efa nitaraina imbetsaka momba ny tsy fisian'ny rano madio ny mponina maro foko ao Khuzestan, izay ahitana vondrom-piarahamonina maro karazana foko Iraniana Arabo, saingy politika famoretan'ny fanjakana no navaly izany.
Hatramin'ny nanombohan'ny fihetsiketsehana, niely nanerana ny faritany maro hafa ny famoriam-bahoaka, ahitana olom-pirenena maneho ny firaisankinan'izy ireo amin'ny vahoaka mangetaheta ao Khuzestan.
Nanakoako tamin'izany famoriam-bahoaka izany ny hiaka manohitra ny governemanta. Heno ireo teny fanevan’ mpomba ny fanjakam-pianakaviana Pahlavi manohitra ny Repoblika Islamika tany amin'ny tanàna sasany, toy ny tanàna atsimon'i Izeh. Ireo mpanao fihetsiketsehana tao an-drenivohitra Tehran kosa nihiaka hoe “Miala ny mpanao didy jadona!” sy “Aza matahotra! Miaraka isika rehetra!”, teny filamatra mampahatsiahy ny Fihetsiketsehana anti-governemantaly nihoso-drà tamin'ny Novambra 2019.
Raha niatrika fitsikerana avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena sy ny mpiaro ny zon'olombelona Iraniana ary mpikatroka ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ny fanjakana Iraniana noho ny famoretana ireo fihetsiketsehana tao amin'ny faritany manankarena solika, dia nilaza ny mpitarika faratampony Iran Ayatollah Ali Khamenei ny zoma fa takany ny anton'ny fahatezeran'ireo mpanao fihetsiketsehana noho ny haintany.
Karazana fihetsiketsehana hafa?
Araka ny tatitra sasany, tapatapaka hatrany ny fifandraisana aterineto herinandro tanatin'ny fihetsiketsehana tany atsimo andrefan'ny firenena.
Ny fihenan'ny rotsak'orana 40 isanjato nandritra ny volana vitsivitsy dia hita fa anisan'ny nahatonga ny tsy fahampian'ny rano manerana ny firenena, izay ny vahoakan'i Khuzestan no niaritra ny mafy indrindra. Na izany aza, nomen'ny mpanao fihetsiketsehana tsiny koa ny tsy fahampiana amin'ny “fitantanana voakolikoly ny loharanon-karena sy ny fomba tery saina amin'ny fampandrosoana ara-toekarena”.
Betsaka ihany koa no niditra amin'ny media sosialy haneho ny fahasosorany.
milaza ity ramatoa ity fa tsy ampy ny rano ho an'ny biby fiompiny ary miala aina ireo, izany no fomba itondran'ity ramatoa sy ny fianakaviany sakafo any amin'ny latabatr'izy ireo. mangataka fanampiana izy. misy mandre ve ny feony? # خو pic pic pic.t.t.t.t
- ?????? (@maedtayem) Jolay 19, 2021
Nampiasaina ny farangoteny toy ny #KhuzestanIsThirsty sy #KhuzestanHasNoWater hanehoana ny fahatezerana amin'ny governemanta sy hijerena ny fihetsiketsehana, ary amin'ny fampanginana ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana.
Nonina tao Mahshahr (Bandar Ma'shur) i Meisam Achresh ilay tovolahy mihira. Tamin'ny 18 Jolay 2021 dia notifirin-dry zareo tamin'ny bala 2 (1 tamin'ny lohany) izy. Nodimandry izy tamin'ny 21 Jolay.
Mampatsiahy ahy an'i Younes Achresh, 17 taona, izay, araka an'i Rokna, nandoro tena tamin'ny taona 2018 noho ny fahantrana
- Roya Boroumand (@RoyaBoroumand) 25 Jolay 2021
Manala ain'ny olona izy ireo satria mitady rano ireo # khuzestanhasnowater # khuzestanIsThirsty # khuzestanSOS pic.twitter.com/5d3cuVymJ5
- Hasti pakravan (@hastipakravan) 22 Jolay 2021
Nilaza tamin'ny Global Voices i Mahmmood Amiri Moghadam, talen'ny Foibe Zon'Olombelona ao Iran miorina any Oslo, fa ny hetsi-panoherana mandeha amin'izao fotoana no mitaratra ny fitomboan'ny hatezerana eo amin'ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka Iraniana, indrindra ireo izay nifanaraka tamin'ny fitondrana. Raha nampitaha ireo fihetsiketsehana tamin'ireo nataon'ny Hetsika Maitso 2009 dia nilaza izy fa:
Ny hetsi-panoherana vaovao dia an'ny kilasy antonony ambany sy ny mahantra ary avy amin'ny distrika sy ny faritra manodidina ny firenena ny ankamaroany, raha ny hetsika Maitso kosa, ohatra, dia manana ny toerany eo amin'ny saranga antonony ambony amin'ny tanàna lehibe kokoa. Na dia nirona amin'ilay lazaina ho toko reformista aza ny mpanao fihetsiketsehana tao anatin'izay roapolo taona lasa izay, ny andiam-pihetsiketsehana vaovao kosa tsy manavaka ireo ankolafy isan-karazany ao amin'ny fitondrana ary manohitra ny Fanjakana Repoblika Islamika manontolo — fikambanan'olona mpitondra izay tsy vitan'ny mpanao famoretana sy lozabe fa tena mpanao kolikoly sy tsy mahay ny asany.
Nanohy ny teniny izy fa vao maika iharan'ny kolikoly sy ny fitantanana tsy mety ny olon-tsotra, rehefa mitombo ny fahantrana, raha “tsy manana vola ampiasaina ividianana fanohanana avy amin'ny mahantra ny fitondrana.”
Mipaingotra eto horonantsary iray hafa ahitana olom-pirenena manao fihetsiketsehana tao #Baharestan, #Isfahan nanomboka androany maraina. Ao anatin'ilay clip, miantsoantso ny mpanao fihetsiketsehana hoe “Tsy mila Repoblika Islamika izahay.”
Ny talata lasa teo dia nosamborina nandritra ny ora vitsivitsy ny vondrona mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona, ​​anisan'izany i Narges Mohammadi, mpanoratra ny “White Torture,” rehefa nivory teo anoloan'ny Ministeran'ny Atitany izy ireo haneho ny fanohanany ireo mpanao fihetsiketsehana ao Khuzestan.
Mpanakanto maro, mpanoratra, mpisolovava, mpanao fanatanjahantena ary fikambanana toa ny Fikambanan'ny Mpanoratra no namoaka fanambarana ho fanohanana ny mponin'i Khuzestan. Maherin'ny 130 ny mpamokatra horonantsary fanadihadiana Iraniana no nanameloka ny famoretana natao tamin'ny mpanao fihetsiketsehana ary nilaza fa “mijoro eo akaikin'ny vahoaka mangetaheta ao Khuzestan izy ireo.” Vondronà mpanao gazety iray ao Iran koa no niantso ny famaranana ny famoretana sy ny sivana any Khuzestan.
Sady tsy vaovao amin'ny faritra ny hetsi-panoherana ankehitriny no tsy voalohany koa ny fanjakana mikapoka amin'ny vy ireo feo manivaka. Tamin'ny taona 2018, namoaka fanambaràna ny Amnesty International maneho ny “ahiahiny momba ny tatitra fa nampiasa hery tsy ilaina sy tafahoatra ny mpitandro ny filaminana, manohitra ireo mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana nandritra ny fihetsiketsehana vao haingana tany amin'ny faritanin'i Khuzestan, izay nitakian'ny olona rano fisotro madio sy azo antoka.”